ROOF RIDGE VENT (PROS AND CONS & DESIGN GUIDE) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Roof Ridge Vent (Pros and Cons & Design Guide)
Roof Ridge Vent (Pros and Cons & Design Guide)
Nalu uphahla lwe-ridge vent pros kunye ne-cons kunye nesikhokelo sokuyila kubandakanya ukuba yintoni, iintlobo ezithandwayo kunye nokuba kutheni ikhaya lakho lingafuna enye. Ukujikeleza komoya ngokufanelekileyo kubalulekile ekhayeni lakho njengoko kunceda ukulawula ubushushu kwaye kugcina nomoya ophefumla usapho lwakho ucocekile. Enye yeendlela ezisisiseko zokuphucula inkqubo yokungenisa umoya endlwini yakho kukufaka indawo yokungena kophahla.
Inkqubo yokungenisa umoya ekhaya igcina umoya uhamba ngokukhululekileyo ekhaya. Ukujikeleza komoya okufanelekileyo kuthintela ukwakheka kwamasuntswana afana nothuli nokubumba kwaye kuqinisekisa ukuba usapho lwakho lunokuphefumla ngokulula. Ukujikeleza komoya okuhle kuthintela namavumba ukuba angahambi.
Yintoni iRidge Vent eluphahleni?
Roof Ridge Vent Pros and Cons
Iindleko zophahla lweRidge Rent
Iindidi ezahlukeneyo zoPhahla lweRidge Vents
Metal uphahla Ridge Vent
I-Shingle Roof Ridge Vent
Ngaphandle kweRidge Roof Vents
Ridge Vent vs Roof Vent: Yintoni umahluko?
Ngaba iRidge Vent iya kuhamba yonke indlela ngapha kophahla?
Ngaba uphahla luyayifuna iRidge Vent?
Kwenzeka Ntoni Ukuba Uphahla alunabungqina?
Ndazi Njani ukuba uphahla lwam lufakwe ngokuchanekileyo?
Ngaba iRidge Vent yeyona ndawo ilungele uPhahla?
Umqolo wophahla yindawo evulekileyo yomqolo efakwe kumqolo wophahla. Inqaku lokufaka i-ridge vent eluphahleni kukuqinisekisa ukungena komoya ngokufanelekileyo ngaphakathi kwesakhiwo.
Nje ukuba kufakwe indawo yokuqaqambisa uphahla endaweni; ihlala igqunywe ngamatyathanga ukuze ifane nophahla olujikelezileyo. Isifakeli esifanelekileyo siya kuqinisekisa ukuba indawo apho kufakwa khona umoya ihlukile ngokungafaniyo nophahla olujikelezileyo.
Ukuphucula ukujikeleza komoya - Olona luvo luphambili lokufaka uphahla lomwonyo wophahla lunento yokwenza nokuhamba komoya kunye nokonga umbane. Njengoko besesitshilo, i-ridge vent iya kuyiphucula inkqubo yomoya yekhaya lakho.
Ulawulo lobushushu -Ukungenisa umoya ngokufanelekileyo kuya kuthetha ukuba amaqondo obushushu ekhayeni lakho kulula ukuwalawula. Kuya kulungelelanisa amaqondo obushushu ngokunceda ukugcina ikhaya lakho lipholile ehlotyeni kwaye lifudumele ebusika.
Ithintela ukufuma -Ukuvuleka komqolo kuya kuthintela ukwakhiwa kobumanzi. Oku kuyakwenza ukonga umbane kunye neendleko zokugcina ikhaya.
Ukonyusa isibheno esibonakalayo kunye nexabiso lokuthengiswa kwakhona -Uphahla lomgangatho ophahla olunophahla onokuthi luphucule uyilo lwelayini yakho yophahla. Ukongeza inokunyusa ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho ngokugcina abathengi abanokubakho kwiindleko zamandla.
amagama amabini okugqibela emva komtshato
Inceda ukunciphisa ungcoliseko lwangaphakathi -Uphahla lomgangatho wophahla lunokunceda ukujikeleza umoya ongaphakathi kunye nokukhupha izinto ezingcolisayo zangaphakathi. Isebenza ngokwendalo ngokuvumela umoya ukuba uphume ngaphandle kwesakhiwo njengoko kuvuthuza umoya ngapha kweefestile.
Isenokubangela ukuvuza -Iyona nto iphambili malunga nophahla lweendawo zokungena, nangona kunjalo, kukuba zinokukhokelela ekuvuzeni. Ngamanye amaxesha, umoya unokubangela ukuba imvula iwe ngokuthe tye.
Xa oku kusenzeka, imvula ingagqibela ngokuwela kwimingxunya yasemqolo nasekhaya lakho. Kungenxa yoko le nto kungacetyiswayo ukuba ufakele ezi ntlobo zeefestile ukuba unophahla olusicaba.
Ixabiso eliphezulu -Ixabiso lokuqala lokufaka i-ridge vent liphezulu. Inkcitho eyongeziweyo iya kuba yimfuneko yokufaka ii-soffit vents ukongeza kwi-ridge vents. I-Soffit vents ivumela ukungeniswa komoya kulawulo olufanelekileyo lobushushu.
Ayisebenzi kwiindawo ezifudumeleyo -Iindawo zokuphakama komphezulu wophahla nazo azikukhuthazwa ukuba amakhaya afudumele. Azisebenzi ngokufanelekileyo ekunciphiseni ukuhamba komoya oshushu.
Ukuba unexesha elifutshane lasehlotyeni, i-ridge vent iya kunciphisa umoya oshushu ekhayeni lakho, kodwa ukuba unexesha elide lemozulu efudumeleyo, kulungile ke kukho iindlela ezisebenzayo zokuphucula ukujikeleza komoya oshushu kwekhaya lakho.
Iindonga zophahla lophahla zizodwa ziya kubiza malunga ne- $ 2- $ 3 ngeenyawo zenyawo nganye. Uphahla oluphezulu oluphakathi luya kuba nommango malunga ne-40 ukuya kwi-50 yeenyawo, ke loo nto iya kubiza malunga ne-8- $ 150 yeedola.
Izinto ezongezelelekileyo zokufakwa kophahla lwe-ridge vents ziya kuba zijikeleze i-35-50 yeedola, ngelixa abafaki baya kubiza malunga ne-45-75 yeedola ngeyure. Ke iprojekthi iyakufika malunga ne- $ 400- $ 500. Jonga ezi ndawo zikwimida Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Zintathu iindidi eziqhelekileyo zeendawo zokuxhoma uphahla phaya.
Olu lolona hlobo luqhelekileyo lophahla lweendawo zokuhamba kwaye, njengoko unokuqikelela kwigama labo, zenziwe ngentsimbi. Umbane uhlala ubunjwe kwisiqwenga esinye sentsimbi esigutyungelwe ngamatye ukuze utshatise uphahla olujikelezileyo.
IAluminiyam yinto ethandwayo kuphahla lwentsimbi. Iifoyile zeAluminiyam zihlala zimile okwe-mushroom, zinama-flanges abanzi macala omabini. Zenzelwe ukuba zifakwe ngaphezulu kophahla lwakho lwophahla, zenza indawo yokujikeleza komoya.
Iifreyithi zophahla lweAluminiyam zinokufakwa zodwa okanye zipeyintwe ukuhambelana nophahla olujikelezileyo. Ukuba ufuna ngokwenene, nangona kunjalo, unokubagubungela nge-shingles.
iminyaka yobudala yokutshata
Ikwabizwa ngokuba yi-shingle-over vent, lo moya we-ridge ugqunywe zi-asphalt shingle caps ezenzelwe ukunceda ukudibanisa kwindawo ejikeleze uphahla.
Uncedo lwe-shingle-over vents kukuba abantu abaninzi babafumana benomdla ngakumbi kunophahla oluqhelekileyo. I-shingles isebenza njengohlobo oluthile lokufihla, ukugcina umoya ungaphuli umgca wophahla.
Kuxhomekeka kumenzi, mhlawumbi unokufumana uphahla lwe-shingle ridge vents kwizinto ezahlukeneyo zophahla ukuze utshatise uphahla lwakho. Unokuphinda ubuze ii-vents ezenziwe ngokwesiko ngemibala eyahlukeneyo okanye iimilo, kodwa oko kuyakuxabisa ngakumbi.
Jonga oku kuphahla lwentaba Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Olu hlobo lweendawo zokungenisa uphahla zenzelwe ukuba zifakelwe kufutshane nonxweme okanye umqolo wophahla. Zihlala zibandakanya isinyithi, umoya ophakanyisiweyo, oncamathiselwe kwimingxunya emithathu. Ukuzifaka, usika umngxunya malunga nobungakanani bomoya uze uyinyuse yonke loo nto emngxunyeni.
Ukuba unophahla olunomqolo omncinci, okanye awunawo umqolo omnye ongagqabhukiyo, ezi zezinye ezilungileyo. Fakela nje ezimbalwa zale mibhobho ecaleni kobude obude kophahla lwakho.
Ukuba ujonge ukungena kungena umoya ekhaya, unokuba ubaleke ungene kumgama wendlela kunye nophahla lwe-ridge vent, ngamanye amaxesha kwinqaku elinye okanye kwiposti. Usenokuba ulibonile ixesha lokungena kophahla.
Ukuba udidekile kancinci malunga nesigama, sukuba njalo. I-ridge vent okanye i-ridge ye-ridge vent yinto efanayo, i-vent efakwe kumqolo wophahla. Indawo yophahla ligama eliqhelekileyo lemingxunya efakwe eluphahleni ukuphucula ukujikeleza komoya.
Ke, i-ridge vent okanye uphahla lwe-ridge vent luhlobo nje lwophahla lwendlu. Eminye imizekelo yeendawo ezinophahla ziindawo ezinomoya opholileyo, ezifakwe phantsi kophahla lwengca, kunye neendawo ezinamagumbi omoya, ezifakwe kufutshane namagumbi ophahla.
Ewe. Ukuba ufuna ukwandisa isiphumo sokungenisa umoya esibonelelwe ngumoya wendlela, kufuneka ihambe yonke indlela enqumla kumqolo okanye eluphahleni lwekhaya lakho.
Ukuba uphahla lwakho alunayo i-ridgeline engagqabhukiyo, nangona kunjalo, kuya kufuneka ufake uhlobo olwahlukileyo lwophahla kumacandelo acwangcisiweyo ophahla aya kuvumela ukujikeleza komoya okuphezulu.
Abanye abantu basebenza ngokudibanisa uphahla lweentunja ngokunjalo. Konke kuxhomekeke kwisitayile sophahla lwakho kwaye, kule meko, ubude bomqolo wophahla lwakho.
Uphahla alunyanzelekanga ukuba lube nomoya we-ridge, kodwa luya kufuna uhlobo oluthile lwophahla lokuphucula umoya ojikelezayo ekhayeni lakho.
Kwakhona, kukho iindidi ezininzi zamaphahla ophahla akhoyo kwaye, kuxhomekeke kwisitayile sekhaya lakho ezinye ii-vents ziya kusebenza ngcono kunezinye.
Umzekelo, uphahla olunencopho okanye oluphelela kumqolo lulungele umoya we-ridge, ngelixa, njengoko besitshilo uphahla olusicaba luya kudinga olunye uhlobo lokuphuma. Bona eminye imizekelo ye iintlobo zophahla Apha.
izipho zabakhwenyana ezivela kumyeni
Ukuba ufuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni xa uphahla lungavulekanga, tyelela ikhaya elidala.
Amakhaya amaninzi amadala angenawo uphahla kuphahla lwawo, yayingeyonto emva koko. Ngenxa yoku, amakhaya amadala ahlala engenamandla kangako.
Ngenxa yokuba ikhaya elidala lingenawo uphahla okanye inkqubo efanelekileyo yokungenisa umoya, kunzima ukulawula ubushushu bangaphakathi beli khaya. Ukungenisa umoya ngendlela engafanelekanga kukwanoxanduva lokwakha amasuntswana emoyeni, yiyo loo nto la makhaya ebonakala ngathi luthuli.
Eyona nkxalabo iphambili kumakhaya angenawo umoya, nangona kunjalo, yinto yokuba athanda ukubumba nokungunda. Ukwakhiwa kokufuma kwenzeka ngokukhawuleza kwikhaya elingenanto, ebonelela ngeemeko zokukhula ezifanelekileyo zomngundo kunye nexoshomba.
Jonga lo mngxunya wokucoca ulwelo kwi Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Zintathu iindlela eziphambili onokuthi uvavanye ukuba uphahla lwakho lukhutshiwe ngokufanelekileyo.
Okokuqala, kuya kufuneka ubone ukudipha kancinane kwiibhili zakho zoncedo njengoko ngoku uchitha imali encinci ukufudumeza nokupholisa.
Okwesibini, awuboni nayiphi na imiqondiso yokujijisana okanye ukuvuza kuphahla lwakho. Ezi zihlala zibonakalisa ukuba ukufuma kuyabanjiswa, apho kufanelekile ukuthintela uphahla oluchanekileyo.
Okwesithathu, kuya kufuneka ubone ukwehla kwenambuzane. Izinambuzane kunye neentonga zikhetha indawo efudumeleyo kunye nefumileyo. Uphahla olulungeleleneyo luya kwenza ikhaya lakho lingabi nazinambuzane.
Ngaba iiridge vents ziyavuza?
Ewe. Ukuba imozulu ayisebenzisani okanye ukuba ayifakwanga kakuhle, imvula ingangena ngophahla lwendlu. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ujonge umoya kunye neendawo ezijikeleze imimoya emva kwesiphango esikhulu.
Kuya kufuneka ujonge ukutywina okanye ukujonga imeko yemozulu kwindawo apho umoya wakho uncanyathiselwe kuphahla lwakho kwaye ujonge umoya ngokwawo ukuba uqhekekile.
Konke kuxhomekeke eluphahleni. Sikhankanyile ezinye izinto ezingasentla ezenza ukuba umqolo uvuleke kakuhle kumaphahla athile kwaye ulungelane nolunye uphahla.
Kuya kufuneka ujonge eluphahleni lwakho kwaye uvavanye ukuba i-ridge vent yeyona nto ilungileyo eluphahleni lwakho okanye ukuba kufuneka ujonge kolunye uhlobo lweendawo ezinophahla.
Ngenye inqaku elinxulumene noko ndwendwela iphepha lethu malunga iintlobo zamaplanga ophahla .
izimvo zokulala ezimfusa
utshata njani nj ngaphandle komsitho
umbono weshawa yomtshato
Uhlaziyo lomtshato lweenwele ezinde
iingubo zomtshato zeendlovu nezegolide
Zonke iiphakheji zomtshato ezibandakanyayo iicaribbean